ပါရီမြို့တွင်ဆန္ဒပြနေသော COVID-19 ဂျက်ဘစ်နှင့်ကျန်းမာရေးဖြတ်သန်းမှုများကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည် ပြင်သစ်ခရီးသွားသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » ပြင်သစ်ခရီးသွားသတင်း » ပါရီမြို့တွင်ဆန္ဒပြနေသော COVID-19 ဂျက်ဘစ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဖြတ်သန်းမှုများကြောင့်အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွားသတင်းများ • ဥရောပခရီးသွားသတင်း • ပြင်သစ်ခရီးသွားသတင်း • အစိုးရရေးရာ • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • လူ့အခွင့်အရေးသတင်း • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းသတင်းများ
ပါရီမြို့တွင်ဆန္ဒပြနေသော COVID-19 ဂျက်ဘစ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဖြတ်သန်းမှုများကြောင့်အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်
ပါရီတွင်မဖြစ်မနေ COVID-19 တံငါသည်များနှင့်ကျန်းမာရေးဖြတ်သန်းမှုများကြောင့်အကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်
"ဒီဖြတ်သန်းမသွားရ!" Nantes ရှိစီရင်စုအဆောက်အအုံကို ၀ ိုင်းဝန်းဆန္ဒပြသူများ၏ရွတ်ဆိုသံများဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်တစ်ခွင်လုံးဆန္ဒပြမှုများသည် Bastille နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူများသည်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရန်ပါရီမြို့လမ်းများသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ပြင်သစ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် Coronavirus ကာကွယ်ဆေးကိုကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရန်နှင့်အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်အခြားအများပြည်သူပိုင်နေရာများသို့သွားရန်ကျန်းမာရေးဖြတ်သန်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားဆန္ဒပြမှုများသည်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှစတင်ခဲ့သည့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောပါရီထောင်ထဲတွင် ၁၇၈၉ မုန်တိုင်းကျရောက်သည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ Bastille နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပါရီတွင်ရဲများသည်ဆန္ဒပြသူများကိုနှိမ်နင်းရန်မျက်ရည်ယိုဗုံးများအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပါရီရှိရဲများနှင့်ရဲများအကြားပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရဲများကဆန္ဒပြသူများအားမျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့်ကျောက်တုံးများနှင့်ပုလင်းများပစ်။ ပါရီရှိဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအစိုးရအဆောက်အအုံများကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ သမ္မတ Emmanuel Macron ၏ COVID-19 ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု.
ပါရီတွင်မျက်မြင်သက်သေများ၏ရိုက်ကူးချက်အရမျက်ရည်ယိုဗုံးများမှထွက်ပြေးလာသူများကိုရဲများကဆန္ဒပြမှုများကိုဖြိုခွဲရန်ရဲများကိုနေရာချထားခဲ့သည်။ အဓိကမြို့ကြီးများကိုဆန္ဒပြသူများနှင့်ရဲများကပိတ်ဆို့ထားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီး၌မျက်ရည်ယိုဗုံးတစ်ဘူးသည်ပျက်ကျသွားရာညစာစားသူများသည်အတွင်း၌ပိုမိုချောမောစေသည်။
လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ #PassSanitaire နှင့် #VaccinObligatoire တို့ပါ ၀ င်သည်။ မက်ခရို၏တနင်္လာနေ့ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်သမားများသည် COVID-19 အားကာကွယ်ဆေးထိုးရန်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်ပြုတ်ရမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
သေးငယ်သောဆန္ဒပြမှုများသည်မြို့၏အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချို့အုပ်စုများသည် Place de Clichy တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
ပြင်သစ်ဒေါသသည်ပဲရစ်အတွက်သာမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှဗွီဒီယိုများသည်တောင်ဘက်ရှိတူလ် ၀ စ်နှင့်မာဆေးတို့၊ အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ Haute-Savoie နှင့်အနောက်ဘက်ရှိ Nantes တို့တွင်ဆန္ဒပြမှုများကိုပြသသည်။
Corsica တွင်လည်းဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပခဲ့ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပေါ်တစ် ဦး ချင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုလူများကန့်ကွက်ရန်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
အွန်လိုင်းသတင်းများအရပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Perpignan တွင်လူ ၁၀၀၀ ကျော်ချီတက်ခဲ့ကြသည်။